Akụkọ - Njikọ nke Enyi, Àkwà Azụmahịa
Ihe njikọ enyi, àkwà mmiri maka ịzụ ahịa
N'okpuru ọnọdụ siri ike nke nje okpueze ọhụrụ zuru ụwa ọnụ, Canton Fair nke 129 bidoro n'igwe ojii n'elekere 9 nke ụtụtụ na Eprel 15, 2021. A ga -eme ngosi ngosi Canton dị ugbu a site na Eprel 15 ruo 24, ihe ngosi ahụ ga -adịkwa ruo 10 ụbọchị. N'adịghị ka ihe ngosi na -anọghị n'ịntanetị tupu 2020, Canton Fair nke afọ a bụ igwe ojii Canton Fair, ndị ahịa si mba na mpaghara niile nwere ike ịkpọtụrụ ndị na -eweta ngwaahịa site na igwe ojii. Ike agaghị agwụ ndị njem ịga njem ma ọ bụ gaa leta ihe ngosi ahụ, mana ha ka nwere ike mụta maka ngwaahịa ha nwere mmasị site na ọwa na ụzọ dị iche iche dị ka mgbasa ozi na -ere ahịa, vidiyo, nkwukọrịta ịntanetị na -ere ere, na ozi.
Ihe ngosi igwe ojii Canton abụghị naanị na -ekwe nkwa njigide ire ahịa nke ọma, kamakwa na -ezere nnọkọ mmadụ, na -ezere ibute ọrịa coronavirus ọhụrụ, na -echebe ahụike na nchekwa nke ndị na -egosi ihe niile na ọha.
Ọnụ ọgụgụ ụlọ ntu na Canton Fair nke afọ a bụ ihe dịka 60,000. A na -atụ anya na a ga -enwe ihe dị ka ụlọ ọrụ ime ụlọ na mpụga 25,000. Enwere ngụkọta nke mpaghara ngosi iri ise, nke ekewara ya na ụdị ngwa ahịa 16 dị ka elektrọnik, igwe, ihe ụlọ, ngwongwo ndị ahịa, nkwalite ụlọ, akwa, akwa na ubi.
Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd. ọzọkwa sonyere n'ihe ngosi a. Ngwaahịa ewepụtara bụ ngwaahịa ịgba mmiri, gụnyere teepu mmiri mmiri mmiri, akpa mmiri mmiri, teepu micro-sprinkler, sprinklers, ngwa teepu mmiri ịgba mmiri, wdg.
Site na ihe ngosi a, anyị emebela kọntaktị na ọtụtụ ndị ahịa si mba ọzọ. Anyị nwere ndị otu R&D ọkachamara na ndị nrụpụta yana otu ndị ọrụ azụmaahịa ọkachamara. Anyị kwenyesiri ike na n'ọdịnihu dị nso, anyị ga -erute mmekọrịta na ọtụtụ ndị ahịa. Anyị na -atụ anya isonyere gị!
Oge ezipụ: Apr-15-2021